India: Finoana sy Andriamanitra | Vaovao momba ny dia
India: Finoana sy Andriamanitra
Carmen Guillen | | India, Fitsangatsanganana any Azia
India Io no firenena faharoa manerantany raha ny isan'ny mponina no tonga amin'ny isa Olona 1,320.900.000 fanisam-bahoaka. ao ambadik'i Sina. Inde, fonenan'ny kolotsaina an'arivony taona, fiteny fiteny tranainy indrindra ary antokom-pinoana sy fomba fisaina maro karazana, dia fonenan'ny olona sy foko maro samy hafa nandritra ny taonjato maro ary nianatra niara-niaina tamin'ny fanomezana kolontsaina mahafinaritra .
Ato amin'ity lahatsoratra natolotray androany ity no entinay anao "Finoana sy Andriamanitra" ary amin'ny iray amin'ireo havoakanay rahampitso dia hampahafantarinay anao koa ny sasany amin'ireo fomban-drazana malaza sy fety malaza indrindra. Amin'ity faran'ny herinandro ity dia miakanjo isika 'sari', manosotra ny tenanay amin'ny turmerika sy sandal izahay ary mameno ny lokonay amin'ny loko ivelany. Manolotra anao India, firenena misy andriamanitra.
1 Fivavahana any India
1.1.1 Ny fototry ny Hindoisma
2 Fitsidihana ny Tempolin'i Meenakshi
3 Fitsidihana ny Tempoly volamena
Fivavahana any India
India dia ny fonenan'ny fivavahana roa be mpihanaka indrindra any Azia: hinduism sy buddhisme. Saingy misy ihany koa ny maro hafa, amin'ny olona vitsy kokoa, izay antitra toy ireo lehibe roa ireo ary manan-danja manan-danja ara-tantara, toa ny Sikhism sy Jainism. Eo koa ny kristianina, jiosy, silamo, pararsis sns.
Na eo aza izany fahasamihafana lehibe ara-pinoana izany dia misy singa iray mampitambatra izay mampivondrona azy rehetra: mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona izy ireo ka tsy azo atao mihitsy ny manavaka ireo lafiny maloto amin'ireo masina. Azonao lazaina izany ny fivavahana dia misy eo amin'ny fiainana andavanandron'ny mponina Indiana.
Ny teny Hindoisma dia tsy noforonina mandra-pahatongan'ny taonjato faha-1.500 fa nipoirany tamin'ny XNUMX talohan'i JK ary milaza ny finoana miorina Lalàna Mandrakizay o 'sanatanadharma'. Ny lalàna mandrakizay dia miorina amin'ny "Vedas" izay ireo boky efatra aseho ny fahendreny.
Ny toetra mampiavaka indrindra ny Hindoisma dia:
Voalohany, ny sampana samihafa amin'ny Hindoisma dia mihevitra izany fisehoana tsy marina ny zava-misy (Maya).
Faharoa, mino azy io reincarnation na fifindra-monina fanahy y ny lalàn'ny karma.
Fahatelo, maniry ny Hindoisma ny fanafahana sy ny fihatahana ny olona tsirairay mba hahatratrarana ny mombamomba ny olona manerantany (Brahma).
Ny fototry ny Hindoisma
La ombivavy Izy io dia raisina ho renin'ny tany, mariky ny fahavokaran'ny tany; masina amin'ny Hindoisma izany.
Ny fiasan'ny fahano omby dia hita ho karazana veneración.
ny biby, amin'ny teny ankapobeny, dia raisina izy ireo MASINA satria Brahma andriamaniny no mitoetra ao aminy.
'No Mukti': io dia ny fanafahana ny olona amin'ny tsingerin'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray.
'Karma-Sansara ': io no fiandohan'ny fanambadiana amin'ny vatana vaovao indray.
Ity fivavahana ity dia teraka tany India teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX talohan'i JK ho fanampin'ny Hindoisma. Ity fotopampianarana ity dia manome lanja manokana ny fahorian'ny fiainana ary fomba iray hanafahana ny tena amin'izany. Ny Buddhism dia natsangan'i Siddhartha Gautama, andriana nandao ny fiainany tany amin'ny fitsarana mba hiditra amin'ny tontolon'ny fisaintsainana (nisaintsaina ny fanaintainana teo amin'izao tontolo izao izy mandra-pahatongany tamin'ny fahalalana ny tena fahamarinana, ka lasa Buddha nanazava).
Ny fotopampianarany dia miorina amin'ny hevitra hoe ny fisiana rehetra dia miteraka fanaintainana; Mba hampitsaharana izany fijaliana izany dia nanolo-kevitra i Buddha mba hanafoanana ny antony mahatonga azy io: ny tsy fahalalana izay mahatonga ny faniriana hiaina sy hanana fananana ara-nofo sasany. Ny fanafahana dia azo amin'ny alàlan'ny fisaintsainana sy ny fahatakarana ireo fitsipika tsotra ireo. Ny fanafoanana io faniriana io dia mitaky fanjakan'ny fisintahana, fandriam-pahalemana lalina, izay antsoina hoe Nirvana.
Fitsidihana ny Tempolin'i Meenakshi
El Tempolin'i Meenakshi Any amin'ny tanàna madurai, ny tranainy indrindra amin'ny fiteny Tamil Nadu na ara-tantara na ara-tantara, miaraka amin'ny 2.600 taona mahery. Araka ny angano dia nilatsaka avy tany amin'i God Siva ny rano masina nitete tany amin'ny toerana misy ny tanàna ka avy eo dia nalaina avy tao ny anarana hoe Madurai, izay midika hoe "tanànan'ny nectar".
Ity tempoly ity dia natokana ho an'i Meenakshi, vadin'i God Siva mahafinaritra. Izy io dia tempoly baroque an'ny maritrano Dravidian hatramin'ny taonjato faha-12 sy faha-45. Ny tilikambo dia manana tilikambo 50 eo anelanelan'ny 4 sy XNUMX santimetatra ny haavony, ka izany no mamorona ireo fidirana XNUMX mankao amin'ny tempoly. Izy ireo dia voaravaka sary an-tsary andriamanitra maro an'isa, biby, ary angano. Ny tilikambony dia avy amin'ny fotoana samy hafa, ny iray izay atsinanana no zokiny indrindra (taonjato faha-XNUMX) ary ny atsimo tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Mahazoa mpanompo an'arivony avy amin'ny lafivalon'ny firenena, iray amin'ireo trano masina indrindra any India. Io koa dia ivon'ny kolontsaina, mozika, zavakanto, haisoratra ary dihy efa an-jato taonany. Ao anatin'ny vala dia misy ny efitr'ireo tsanganana an'arivony, tsy mitovy amin'ny iray hafa ary voaravaka amin'ny fomba mahafinaritra sy amin'ny an-tsipiriany.
Fitsidihana ny Tempoly volamena
Ity tempoly ity dia miorina ao amin'ny tanàna masin'i Amritsar. I Ram Das no nanangana azy, iray amin'ireo mpampianatra amin'ny fivavahana Sikk, ao amin'ny taonjato XVI.
Trano tsara tarehy izy io marbra voasokitra tsara tarehy, izay ravina ravina volamena nohajaina. Ny iray amin'ireo manintona an'ity tranobe ity dia ny hoe voahodidin'ny farihy iray izy io izay voalaza fa manana fanasitranana ny rano. Eo akaikin'ny tempoly dia ny Guru Ka Langar, izay anaterana sakafo maimaim-poana ho an'ny mpivahiny isan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » India: Finoana sy Andriamanitra
Dayamis dia hoy izy:
Liana amin'ny kolontsaina Indiana aho, mijery tantara kely antsoina hoe maharary ny fitiavana aho ary naseho ny fomba amam-panaony rehetra
Mamaly an'i Dayamis
Firenena iza no notoroan'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny tsy hitsangatsangana?
Mividiana rakitsoratra sy vinyl any New York